Isaphulelo seKhomishini yeBinance-Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Isaphulelo kwimirhumo yeBinance
tag: Binance, Ukuhanjiswa kweBinance, I-ID yokuhanjiswa kweBinance, Ikhowudi yokuDluliselwa kweBinance, Code encoma
Urhwebo ngalunye, umsebenzi ngamnye wezemali owenziwa kwiBinance, olona Tshintshiselwano lukhulu emhlabeni namhlanje, luneendleko, ikhomishini, a Ntlawulo. Ukuba awusabhaliswanga kolu Tshintshiselwano ungayenza ngekhowudi yokudlulisa https://www.binance.com/en/register?ref=EV6X8DW5 (i-id yokudlulisela: EV6X8DW5) Kwaye uya kuba ne-20% yekhomishini enesaphulelo ngokukhawuleza, ngonaphakade. Ngoba kutheni?
I-Binance yayiyiphedi yokundivulela, ngakumbi ukufumanisa ifayile ye I-Binance Smart Chain kunye neeapps zayo zeDeFi. Ukuba umama angafunda esi sivakalisi angathi: "Uyandibhanxa?". Ukuba uyazibuza, landela ikhonkco elingasentla kuluhlaza ukuze uqonde ukuba yintoni kwaye isebenza njani.
Ukuba uyayithanda i-Crypto uyazi ukuba wonke umntu othetha ngayo uthi: Andinguye umcebisi wezezimali! Isilumkiso Ke ndithetha le nto nakuwe, kwaye ulumke: andinguye umcebisi wezezimali. Andikuniki ngcebiso malunga nendlela yokutyala imali yakho, andithembisi inkululeko yakho yezoqoqosho okanye iLambo kumngxunya wemoto. Ukutyala imali kuhlala kubandakanya umngcipheko, kwaye kufuneka ubenolwazi ngokupheleleyo ngalo.
Inqaku langaphambiliI-Binance Coin (BNB): Uphawu lwendalo lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-crypto emhlabeni
Inqaku elilandelayoI-Binance: Ukudluliselwa kwangoko kwetyala kunye nokuhanjiswa kweengcingo zeSePA
Uyifumana njani imali yeemali zedijithali ngokutshintsha kweBinance Liquid